WARSAXAAFADEED WASAARADDA GAADIIDKA | Dhaymoole News
WARSAXAAFADEED WASAARADDA GAADIIDKA
April 30, 2019 - Written by wariye999
WARSAXAAFADEED:Dhawaan warbaahinta madaxbanaan waxaa soo gaadhay eedayn ka dhan ah Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka oo uga timid xubin ka tirsan Xisbiga mucaaridka ee Waddani.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka waxa lagu aasaasay xeer-nidaamiyaha Dhismaha Wasaaraddaha iyo Hay’adaha Xukuumadda L/r 01/2018 Qodobka 25aad,.
Hadaba, sida ku cad Qodobka 94 ee Dastuurka Somaliland, iyo sidoo kale Qodobada 21 iyo 22 ee xeerka kala xadaynta Nidaamka Xukumadda iyo Hayaddaha Madaxa Bannaan Xeer L/r 71/2015 ayaa qeexay xilka, waajibaadka awooddaha wasiirka.
Sidaas darteed, Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo horumarinta Jidadku ma isticmaalin awood ka baxsan Dastuurka iyo xeerarka Dalka.
Waxaa xusid-mudan, in Cabdi Haybe oo ah masuulka eedaynta soo jeediyay ku sifaysan yahay shakhsi awoodiisii wasiirnimo ee Wasaaradda Caafimaadka ku qabsaday MCH Tuuladda Gumar wakhtigu ahaa wasiirka caafimaad, ilaa maantana deegaanka tuuladda Gumar khilaaf u dhaxeeyo.
Sida uu waajibiyay Xeerka Waddo-marista Gaadiidka Xeer L/r 56/2013 Qodobadiisa 47, 37, 38, 84, iyo 81 oo waajibinaaya Baadhista Gaadiid iyo Q76 Xawaaraha Gaadiidka.
Xubintaas, waxaa iskaga qasmay xulashada geerashyada (Workshops) iyo Ruqsad-siinta Wasaaradda Gaadiid iyo Horumarinta Jidadka. Guddiga Qandaraasyadda Qaranka JSL ayaa soo xulay shirkaddaha fulinaya Baadhista tayadda gaadiidka laakiin wasaaraddu waxay siinaysaa ruqsad, 7 workshop ayaa la siinaya ruqsadda, Cid u wasiirku kula shuraakoobayna ma jirto. ‘Nin weyn oo hadal ka dhacay waa geed qolof ka dhacday’.
Odaygu hadii uu hayo caddaymo ku filan ha u soo bandhigo shacabka, hadii kale waa lagula xisaabtimi.
Sida ku cad Xeerka Wada marista Xeer L/r 56/2013 Q4 farqadiisa 1aad xaraf (x), Golayaasha Deegaanka ayaa awood sharci u leh Ganaaxa Gaadiidka wadooyinka magaalooyinka, sidoo kale Q4 Farqadiisa 3aad xaraf (KH), Wasaaradda Gaadiidka ayaa awood sharci u leh Ganaaxa Gaadiidka wadooyinka ka baxsan Magaalooyinka ,
Xubintaas, waxaa ka muuqata aqoon-daro sharci iyo maamul iyo Mucaaridnimo cilmi iyo caqli midna aan ku dhisnayn.
Sidaas-darteed ma joogno Somaliland British protectorate ee waxaa fiican in aad aqoon fiican u yeelato shuruucda Dalkaaga .
Madaxa xafiiska Warbaahinta W.G.& Hor.Jidadka